Indlela yokwenza iNapalm B - I-Chemical Synthesis yeGel Sol
I-Synthesis Synthesis yeSolved Sol
I-Napalm ligama elinikezwa nayiphi na ifomu yepetroliyil okanye enye i- petroleum etsha . Isetyenziselwa iimeko apho umbane unzima ukufaka isicelo okanye enye ayiyi kuhlala apho ifakwe khona. I-Napalm B, ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-napalm, ngumzekelo we- sol gel. Ingqungquthela ye-napalm elula isingeniso esithakazelisayo kwizilwanyana kunye nee- gel .
35 g i-polystyrene (umz., ISyrofoam okanye enye i-polystyrene foam , esetyenziselwa iikomityi ezixutywayo kunye nokupakisha amantonga)
100 ml petroli
umdlalo okanye ukukhanya
Phula i-polystyrne ibe yinto encinci. Ngamanye amaxesha unokufumana i-polystyrene i-foam ubuhlalu, obuya kusebenza kakuhle ngaphandle kokusetyenziswa okungekho.
Dlulisa i-100 ml ye-petroli kwisitya seglasi, njenge-beaker 250 ml. Naliphi na isilayidi yesilayidi esifanayo esifanelekileyo.
Gxila kwi-polystyrene, encinci ngexesha. I-polystyrene foam iya kuba yi-fizz kwaye ibonakale ichithwa, nangona oku kwenene kukubunjwa kwe-sol gel.
Xa zonke i-polystyrene zongeziweyo, akufuneki kubekho i-petroli eseleyo. Ikhonkco yeglasi iya kuba ne-sol rigid sol.
Imiba kunye novavanyo lweNapalm kunye neGel Sol
Endaweni yangaphandle, kude nokushisa okanye ilangabi, guqula isitya se-gel sol. Phawula ukuba iya kukhanyela ukukhupha ngaphandle kwephepha. Nangona i-sol isilwelo, iziphatha njengento eqinile kwinto yokuba igcine ifom yayo.
Ukuba i-sol ayiyi kuphuma kwi-ingilazi yeglasi, yiphononise kakuhle ukuba uyikhuphe. Qaphela iimpawu zeNapalm B ezenza i-sol gel.
Ngomhlaba okhuselekileyo womlilo, galela i-napalm. Ukuba uthanda, qhathanisa ukutsha kwe-napalm kunye nokutsha kwe-100 ml ye-petroli.
Le projekthi ibhetele kakhulu eyenziwa ngaphandle ngaphandle kokuba uphethiloli uphezulu kwaye unobuthi. Gqoka izigulane zokukhusela kunye neiglavu ukuze uzikhusele ekuqhutyeni kwe-liquid.
Sebenzisa unonophelo xa ubetha i-napalm. Kucetyiswa ukuba kube nomlilo wokucima umlilo . Le projekthi ijoliswe kubafundi abavuthiweyo bezakhemikhali. Gcina zonke izixhobo kude nabantwana kunye nezilwanyana.
Inkcazo: URobert Bruce Thompson, Isikhokelo Esixhasayo kwiKhaya leKhemistry Iingcaphephe - Zonke iLab, akukho Mfundiso (2008) u-O'Reilly, iphe. 326-329.
Nceda umntwana wakho enze iStethoscope Yakhe
13 Iindlela Ezintle Zokuthi "Hanukkah!"
1965 I-PGA Championship: Marr Staves Off Nicklaus, Casper